မြန်မာစစ်တပ်ကို နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းက လက်မခံရန် အိုဘားမားတိုက်တွန်း | BurmeseAsia
Home News မြန်မာစစ်တပ်ကို နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းက လက်မခံရန် အိုဘားမားတိုက်တွန်း
မြန်မာစစ်တပ်ကို နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းက လက်မခံရန် အိုဘားမားတိုက်တွန်း
Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed without permission. Mandatory Credit: Photo by Pablo Martinez Monsivais/AP/REX/Shutterstock (7765342m) President Barack Obama speaks during his farewell address at McCormick Place in Chicago Obama, Chicago, USA - 10 Jan 2017
ဆယ်စုနှစ်တစ်စုလောက် လွတ်လပ်မှုရခဲ့တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ စစ်တပ်ရဲ့ တရားလက်လွတ် ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်စွာ သူ့စိတ်ကြိုက်ဇွတ်လုပ်ယူနေတာတွေကို မြန်မာပြည်သူတွေက ဘယ်တော့မှ လက်ခံလာလိမ့်မယ်မဟုတ်သလို နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝိုင်းကလည်း လက်သင့်မခံဖို့ အမေရိကန်သမ္မတဟောင်း ဘားရက်ခ် အိုဘားမားက တိုက်တွန်းပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
ပြည်သူ့အသံကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ နိုင်ငံအနှံ့အပြားက လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေကြောင့် စိတ်အားတက်ကြွရသလို အရပ်သားတွေအပေါ် ကြေကွဲစရာ အကြမ်းဖက်ရက်စက်မှုတွေကြောင့် စိတ်ပျက်တုန်လှုပ်စရာဖြစ်နေခဲ့တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကို ကမ္ဘာကြီးက ဆက်လက် အာရုံစိုက်ထားရမယ်လို့လည်း အိုဘားမားရဲ့ ကြေညာချက်မှာ ရေးသားထားပါတယ်။
အိုဘားမားက လက်ရှိ အမေရိကန်သမ္မတ ဘိုင်ဒင်နဲ့ မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေရဲ့ စစ်အစိုးရအပေါ် ဒဏ်ခတ်မှုတွေ ဒီမိုကရေစီပြန်လည်ဖြစ်တည်ဖို့ အားပေးမှုတွေကို ထောက်ခံအားပေးတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
မြန်မာပြည်သူတွေ ငြင်းပယ်ဆန့်ကျင်နေတဲ့ လူသတ်စစ်အစိုးရဟာ မတည်ငြိမ်မှုတွေ လူမှုအကြပ်အတည်းတွေ ကျရှုံးနိုင်ငံဖြစ်မယ့်အန္တရာယ်တွေကိုပဲ ယူဆောင်လာလိမ့်မယ်ဆိုတာ မြန်မာ့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေက အသိအမှတ်ပြုသင့်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
ဒီမိုကရေစီစံနှုန်းတွေ အခြေခိုင်နေမယ့် အနာဂတ်ကာလကိုလိုချင်နေကြတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့လည်း တိုင်းရင်းသားနဲ့ ဘာသာရေးအုပ်စုမျိုးစုံကြားက ညီညွတ်ရေးကို ဆက်လက်ခိုင်မာ နေသင့်ပါတယ်လို့ အိုဘားမားက တိုက်တွန်းပါတယ်။
လက်ရှိအချိန်ဟာ မှောင်မိုက်နေပေမယ့် မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ ပြသခဲ့ကြတဲ့ ဒီမိုကရေစီတန်ဖိုးတွေအပေါ် စည်းစည်းလုံးလုံး မဆုတ်မနစ် သန္နိဋ္ဌာန်ချထားကြတာတွေကြောင့် အိုဘားမားဟာ စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ရကြောင်းနဲ့ ဒီအခြေအနေကြောင့် ပြည်သူ့ဆန္ဒကိုလေးစားတဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့အတူ အနာဂတ်မြန်မာနိုင်ငံတော်မျိုးအတွက် မျှော်လင့်ချက်တွေရှိလာရတယ်လို့ သူကဆက်ရေးထားပါတယ်။
၂၀၀၉ မှ ၂၀၁၇ အထိ အမေရိကန်သမ္မတရာထူး သက်တမ်း ၂ ခုဆက်တိုက် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ ဘားရက်ခ်အိုဘားမားဟာ မြန်မာနိုင်ငံကို ၂ ကြိမ်လာရောက်ခဲ့ဖူးပြီး မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီရေး ထောက်ခံအားပေးခဲ့တဲ့ သမ္မတလည်းဖြစ်ပါတယ်။
Previous articleIndonesian submarine sank off Bali, navy says
Next articleတရုတ်နှင့် ရုရှားတို့၏ ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးထားသူများကို ခရီးသွား ပြည်ဝင်ခွင့်မပေးရန် အမေရိကန်နှင့် ဥရောပနိုင်ငံများ ဆုံးဖြတ်